inxi: script hahafantarana ny fitaovan'ny rafitra GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Indraindray dia ilaina ny mahafantatra amin'ny antsipiriany izay singa fitaovana ampiasaina amin'ny solo-saintsika. Ho an'ity dia efa hitantsika fa misy fitaovana sary como el Hard Info na dia azo atao ihany koa ny mijery ny rafitra boot message na mampiasa mampiasa sasany baiko, ahoana lsusb, lspci, lshw o dmidecode.
Na izany aza, omaly aho nahita safidy vaovao, izay apetrakao ao anaty fizarana malaza: inxi.
1 Inona no atao hoe inxi?
2 Ahoana ny fametrahana inxi
2.1 Mametraka inxi amin'ny Arch sy ny derivatives:
2.2 Mametraha inxi amin'ny Debian / Ubuntu ary ny derivatives:
2.3 Mametraka inxi amin'ny Fedora sy ny derivatives:
3 Fomba fampiasana inxi
Inona no atao hoe inxi?
inxi Izy io dia script feno tokoa izay mamela haneho ny mombamomba ny fitaovan'ny rafitra. Nosoratana tamin'ny bash izy io ka azo ampiasaina mivantana avy amin'ny terminal.
inxi tonga mialoha napetraka miaraka amin'ny SolusOS, crunchbang, areti-mifindra, Linux Mint, Anti-X y Arch Linux, fa satria script bash izy dia miasa amin'ny distro maro hafa. Na dia natao hampiasaina amin'ny rindranasa chat toy ny IRCIzy io koa dia miasa amin'ny akorany ary manome fampahalalana marobe. Izy io dia forkan'ny script infobash, tena ilaina tokoa nefa tsy nahazo fikojakojana firy tato ho ato.
inxi dia mifanentana amin'ny Resadresaka, xchat, irssi, Quassel; ary koa amin'ny ankamaroan'ny mpanjifa an'ny IRC.
Ahoana ny fametrahana inxi
inxi Izy io dia ao amin'ny tahiry toerana misy ny ankamaroan'ny fizarana, noho izany azo atao ny mametraka azy amin'ireto baiko manaraka ireto:
hametraka inxi en andohalambo ary ny derivatives:
# pacman -S fiarakaretsaka
hametraka inxi en Debian / Ubuntu ary ny derivatives:
# apt-mahazo mametraka inxi
hametraka inxi en Fedora ary ny derivatives:
# mametaka inxi
Fomba fampiasana inxi
Mila manokatra terminal fotsiny ianao ary mihazakazaka ny script:
Azo atao ny mametra ny vaovao ho aseho arak'ireto masontsivana manaraka ireto:
-A Asehoy ny fampahalalana momba ny kara-peo.
-C Asehoy ny fampahalalana CPU, ao anatin'izany ny hafainganan'ny famantaranandro CPU.
-D Asehoy ny fampahalalana momba ny kapila mafy, fa tsy ny maodely fotsiny.
-F Asehoy ny vokatra feno ho an'ny taxi. Ahitana litera ambony rehetra, plus -s ary -n.
-G Asehoy ny fampahalalana momba ny karatra sary (karatra, karazana, vahaolana, solosaina glx, kinova sns.).
-I Fampahalalana ankapobeny: dingana mavitrika, fotoana fohy, fahatsiarovana, mpanjifan'ny IRC, kinova inxi.
-l Asehoy ny mari-pamantarana fizarazarana.
-n Asehoy ny mombamomba ny karatra tambajotra. Mitovy amin'ny -Nn. Mampiseho ny interface, hafainganana, adiresy MAC, status sns.
N Asehoy ny mombamomba ny karatra tambajotra. Miaraka amin'ny -x, mampiseho ny PCI BusID, isan'ny seranana.
Raha te hahita lisitra feno misy safidy aho dia manome soso-kevitra ny hamaky ny pejy ofisialy an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » inxi: script hahitanao amin'ny antsipiriany ireo singa enti-miasa ao amin'ny rafitrao
thalskart dia hoy izy:
Nanandrana aho ary tiako ny habetsaky ny fampahalalana omeny miaraka amin'ny fahatsorany. Toro tena tsara 😉
Mamaly an'i thalskarth
Tena tsara, tsy fantatro izy. Ankasitrahana izany.
Satria i Gentoo dia tsy manana izany amin'ny alàlan'ny toerana misy anao, ity ny fizarako. Eto no ahitanao ity sy ireo fonosana hafa 😀
Tena ilaina izany, nataoko voasoratra eo amin'ireo fitaovako .. .. Noheveriko ho hitako ato amin'ny bilaogy izany .. ee
Ho an'ny famoahana tanteraka .. .. inxi -v7
Izany no ananan'ity bilaogy ity. Nanoratra zavatra maro be izahay izay toa efa nanoratra momba ny zava-drehetra. Toy izany koa, mbola tsy nanao lahatsoratra manokana momba ny taxi izahay. Nanamarina aho talohan'ny nanoratako ity lahatsoratra ity.
Tena tsara, ary feno, ny marina dia mahagaga ahy izany.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny mora vakina, izay ankasitrahana.
Manuel R. dia hoy izy:
Toro tena tsara =)
Fanamarihana iray monja: Niezaka ny nametraka azy tao amin'ny Kubuntu Precise aho, saingy tsy nipoitra tao amin'ny trano fitehirizana izany, ka namaha azy aho tamin'ny fampidirana ny repository Linux Mint Maya (manafatra manokana), izay mampiditra azy ary dia izay.
Misaotra mahatadidy an'io.
Nanana azy io nandritra ny fotoana ela aho ary satria najanoko ny fampiasana azy dia hadinoko ny anarany.
Tiako ireo programa tsotra izay mamaha haingana ny fisalasalanao.
hey, lainga ny hoe tonga "apetraka mialoha" amin'ny archlinux izy io, raha tsy tena manana zavatra napetraka izy io, tsy manana izany amin'ny fototra, kely kokoa amin'ny base-devel. Azonao atao ny manitsy an'io fampahalalana io azafady.
Misy kernel Linux 3.16 ... inona no vaovao?